नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हिंजोका, आजका सबै सत्ताधारीहरुको लँगौटी खोल्दैन र यि दुई भिडियो र रेपोर्टिङले ??
हिंजोका, आजका सबै सत्ताधारीहरुको लँगौटी खोल्दैन र यि दुई भिडियो र रेपोर्टिङले ??
एकथरीलाई बिरोध गर्दा ठिक्क अर्का थरीलाई अरिङ्गगाल बनेर जाई लाग्दा ठिक्क, जनता सधै दिक्कको दिक्क ! यि दुई भिडियो र रिपोर्टिङले देशको बर्तमान अवस्था बोल्दैन र ?? हिंजोका, आजका सबै सत्ताधारीहरुको लँगौटी खोल्दैन र ?? पत्रकार टेकनारायण भट्टराईको स्थलगत रिपोर्ट